Mety Hahitanao Loza Itony Tetiandro Itony Ao Thailandy Sy Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2016 7:52 GMT
Ny Praiminisitra teo aloha, Thaksin Shinawatra miaraka amin'ny zandriny vavy, praiminisitra teo aloha Yingluck Shinawatra. Ny tetiandro taona 2016 an'ny antoko politikany, izay mampiseho an-dry zareo, dia voalaza fa noraofin'ireo manampahefana any amin'ireo faritany sasany any Thailandy. Sary teo amin'ny pejy Facebook-n'i Yingluck Shinawatra
Noheverina ho mora ampiasaina ireo tetiandro, fanomezana tsy mahasosotra mandritra ny Taombaovao, saingy mety hampiditra anao am-ponja ireo tetiandro sasany , indrindra indrindra raha monina ao Thailandy sy Myanmar ianao.
Tao Thailandy, noraofin’ireo manampahefana ireo tetiandro sasany izay nahitàna ny sarin'ny praiminisitra roa teo aloha. Nandritra izany fotoana izany, tao Myanmar, lehilahy dimy ihany koa no nosamborin’ny fanjakana fa nanonta tetiandro iray mikasika ny vondrona foko iray ‘tsy ara-dalàna.
Ny Fitondrà-miaramila Thai, izay naka ny fahefana tamin'ny 2014, no voatondro fa nanajanona ny fizaràna an'ireo tetiandro 2016 navoakan'i Pheu Thai, antoko politikan'i Thaksin sy Yingluck Shinawatra. i Thaksin izay Praiminisitr'i Thailandy niharan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2006. Nandositra ny firenena izy tamin'ny 2008 taorian'ny fanamelohana azy ho nanao kolikoly ary mbola miaina an-tsesitany ankehitriny. Zandry vavin'i Thaksin i Yingluck izay voafidy ho praiminisitra ny taona 2011, saingy tratran'ny fanonganam-panjakana ihany koa tamin'ny 2014.
Ny 5 Janoary teo, nisy vehivavy mpiandany amin'i Yingluck voaantson’ny tafika noho ny fizaràna ireo tetiandro 2016 an'ny antoko mpanohitra Pheu Thai. Mpiasam-panjakana monisipaly sasantsasany ao avaratr'i Thailandy no nanohitra ilay fanomezana maimaimpoana ireo tetiandro, izay nisy ny sarin'i Yingluck mamihina an'i Thaksin anadahiny. Notenenina ireo mpiasam-panjakana mba tsy hizara tetiandro mandritra ireo fihaonambe satria manjary misy mandika ho fihetsika ‘politika mitongilana’ izany.
Nolavin'ny fanjakana ny hoe izy no nanakana ny fizaràna ireo tetiandro, na dia nampitandrina ny olona aza ilay praiminisitra vao niala teo amin'ny toerany, izay lehiben'ny tafika nitarika ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 2014, mba hanajanona ny fankafizana ireo mpanitsakitsaka lalàna. Mety ho nilaza ankolaka an'i Thaksin izy, izay heverina ho toy ny mpandroba any am-pandosirana sady voaheloka.
Mihiaka hadalàna mikasika ny fandraràna ilay tetiandro Thaksin-Yingluck ny Pheu Thai
#Thailand ftiondrà-miaramila nisakana tetiandro misy ireo sarin'i #Thaksin & #Yingluck ho toy ny loza mitatao ho an'ny fiarovam-pirenena. pic.twitter.com/meyX6ilPUt
Na dia teo aza izany, voazara tany amin'ireo faritra maromaro ireo tetiandro.
Tetiandro tsara. #Bangkok #Yingluck #Thaksin #Thailand pic.twitter.com/vPAr1NJRAc
Pravit Rojanaphruk, mpanao gazety izay nampanantsoin'ireo manmpahefana tamin'ny taona lasa noho ny tatitra feno tsikera nataony momba ny fitondrà-miaramila, no nanamarika hoe ahoana ny fandefasana sary amin'ny tetiandro no manjary fihetsika fihantsiana:
Iza no hihevitra fa ny fakàna tsotra fotsiny sary miaraka amin'ny tetiandro dia ho lasa fihetsika fanoherana? #Thailand ht PYChong pic.twitter.com/xBfAcTuBWw
Ao Myanmar, nosamborin'ny fanjakana ireo mpanonta tao ambadiky ny tetiandro Rohingya. Ny ankamaroan'ny Rohingya dia silamo izay tsy nahazo eken'ny fanjakana ho foko iray ao anatin'ireo ao amin'ny firenena.
Misy 100 mahery ireo foko ao Myanmar, izay vahoaka bodista no betsaka indrindra. Na dia efa ampolo taonany maro nipetrahana tao avaratr'i Myanmar aza, noheverin'ny governamanta ho toy ny mpifindra-monina tsy ara-dalàna ny Rohingya. Maro amin'izy ireo no mipetraka aminà toby vonjimaika na nandositra any amin'ireo firenena akaiky eo ho toy ny mpitsoa-ponenana an-tsambokely. Mamaritra ny Rohingya ho toy ny olona tsy manana zom-pirenena voahenjika indrindra eran'izao tontolo izao, ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona.
Nosakanan'ny fanjakana ny tetiandro Rohingya izay ahitana ny fampahafantarana ara-tantara momba ilay vondrom-poko, satria lazaina ho mandrisika fankahalana sy herisetra.
Mahatonga ny olona ho any amponja ity tetiandro ity ao #Myanmar. Nahoana? Noho ny teny “Rohingya”. #FamongoranaFoko #HeloPanjakan pic.twitter.com/2fBiwSm8st